NMB Bank Limited(NMB Bank Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
विदेशबाट फर्किएका १ हजार युवालाई एनएमबी बैंकले स्वरोजगार बनाउने, भयो त्रिपक्षीय सम्झौता
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंकले एकहजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय युवा परिषद र रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालबीच सहुलियत दरको कर्जा प्रवाहको बिषयमा एक महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ । बैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी नेपालको मौलिक पहिचान, कृषि, पर्यटन, वन, जडिबुटी, खनिज तथा जलश्रोत र विज्ञान तथा प्रविधि...
एनएमबी बैंकले ३९% सम्म लाभांश बाँड्नसक्ने, खूद ब्याज आम्दानीमा छलाङ
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा आफ्ना सेयरधनीलाई ३९ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्नसक्ने देखिएको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म ९७ करोड २१ लाख वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको छ । मुनाफाको यो दर चौथो त्रैमाससम्म पनि कायमै रहेमा बैंकले यो वर्ष १ अर्ब २९ करोड ६२ लाखको हाराहारीमा वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गर्ने...
एनएमबी बैंकको आठौं हेरिटेज वाक
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकले विश्व सम्पदा दिवसको उपलक्षमा आठौं 'एनएमबि बैंक हेरिटेज वाक-२०१९' आयोजना गरेको छ । बैंकले विगत वर्षहरु देखि आम जनमानस तथा स्थानीय समुदायलाई सम्पदाको महत्व बुझाउनु तथा तिनको उचित संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हेरिटेज वाक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । बैंकले विगत ७ वर्ष देखि हेरिटेज वाकको आयोजना...
एनएमबी बैंकद्वारा ‘सबैको साहारा बचतखाता’ लञ्च, रु. १० लाखको बिमा सित्तैमा
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंकले ‘सबैका लागि बचत, सधैंका लागि साहारा’ भन्ने नारासहित ‘एनएमबी सबैको साहारा बचतखाता’ संचालनमा ल्याएको छ । बैंकमा खोलिने प्रत्येक ‘सबैको साहारा बचत खाता’मा बैंकको तर्फबाट रु. १०० जम्मा गरिने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले जानकारी दिए । यो खातामा बैंकले प्रत्येक ग्राहकहरुको अग्रिम...
आजदेखि एनएमबी बैंकको ऋणपत्र निश्कासन, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक लिमीटेडले आज(फागुन ३० गते)देखि ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निश्कासन गरेको छ । बैंकले रु. १००० दरका कुल ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निश्कासन गरेको हो । ऋणपत्रमा छिटोमा चैत ४ गतेभित्र र ढिलोमा चैत १४ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । इच्छुकले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १२ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्...
फागुन ३० देखि एनएमबी बैंकले रु. ३ अर्बको ऋणपत्र निश्कासन गर्ने
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक लिमीटेडले आगामी फागुन ३० गतेदेखि ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निश्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले रु. १००० दरका कुल ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निश्कासन गर्न लागेको हो । ऋणपत्रमा छिटोमा चैत ४ गतेभित्र र ढिलोमा चैत १४ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । इच्छुकले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १२ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन...
एनएमबी बैंकलाई रु. ३ अर्बको ऋणपत्र निश्कासन अनुमति, १०% ब्याज पाइने
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले एनएमबी बैंकले ३ अर्ब मूल्यको ऋणपत्र निश्कासनको स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बोर्डले प्रति यूनिट १००० दरका ३० लाख कित्ता '१०% एनएमबी बैंक डिवेञ्चर-२०८५' निश्कासनका लागि बैंकलाई फागुन १४ गते स्वीकृति दिएको हो । बैंकले कुल कित्तामध्ये ४० प्रतिशतले हुन आउने १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नेछ...
एनएमबी बैंकले बेलायतबाट १.५ करोड डलर ऋण ल्याउने
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकले बेलायतको सिडिसि ग्रुपसँग अमेरीकी डलर १ करोड ५० लाखको कर्जा लिने सम्झौता गरेको छ । यो ग्रुप बेलायत सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको वित्तीय संस्था हो । यो संस्थाले सव–साहारा अफ्रिका तथा दक्षिण एसियाका देशहरुमा रोजगार सिर्जना गरी आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्दै आएको छ । सिडिसीले एनएमबी बैंकको...
एनएमबी बैंक: ब्याज आम्दानी र रिजर्बमा छलाङ
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा एनएमबी बैंकले खूद नाफा अर्ब कटाएको छ । यो बैंकले १ अर्ब १० करोड खूद नाफा आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफा १५.२८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा बैंकको नाफा ९६ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । खूद नाफा बढे पनि बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा चाहि घटेको छ । अघिल्लो वर्षको यही...
वन टू वाचसँग सम्बद्ध कम्पनीको ब्रिज फाइनान्सिङ एनएमबी बैंकले गर्ने
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक र वन टु वाचबीच वन टू वाचका लगानी कम्पनीहरूका लागि ब्रिज फाइनान्सिङ्ग व्यवस्था सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल के.सी. र वन टू वाचका प्रबन्धनिर्देशक विलियम ग्रिमिङ्कबीच एनएमबी बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा यससम्बन्धी...
एनएमबीका सेयरधनीले ३०% लाभांश पाउने, चुक्तापूँजी ९.६१ अर्ब पुग्यो
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक लिमीटेडका सेयरधनीले ३० प्रतिशत लाभांश पाउने भएका छन् । बैंकको बिहीबार काठमाण्डौको भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा आयोजित २३ औं वार्षिक साधारणसभाले १० प्रतिशत बोनस सेयर र २० प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि समेत) वितरण गर्ने संचालक समितिको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । यो अजेण्डा पारितसँगै सेयरधनीले ३०...
एनएमबी बैंकद्वारा गरिमा विकास बैंकलाई प्राप्तिको प्रयास, कारण यस्तो छ
काठमाण्डौ । जारी वार्ता र छलफलले सकारात्मक मोड लिए नेपालको बैंकिंग इतिहासमा ढिलोमा २ साताभित्र अर्को एउटा इतिहास रचिनेछ । आफैं चुक्तापूँजी पुर्याएर निकै राम्रो विजिनेश गरिरहेको एनएमबी बैंकले राष्टिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा राम्रो पोजिसनमा रहेको गरिमा विकास बैंकलाई प्राप्तिको इतिहास रच्न लागेको हो । यसअघि प्राइम कमर्सियल...
सरकारी अभियानलाई एनएमबी बैंकको साथ, ८ प्रकारका व्यवसाय गर्दा सहुलियत कर्जा पाइने
काठमाण्डौ । नेपालसरकारद्वारा जारी “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५” अनुसार विपन्न वर्गका जनतालाई लक्षित गरी व्यवसाय तथा लघु उद्यमका लागि सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले एनएमबि बैंकले लघु तथा विपन्नवर्ग कर्जा अन्तर्गत “एनएमबि सहुलियतपूर्ण कर्जा” संचालनमा ल्याएको छ । यो कर्जा...
एनएमबी बैंक र एफएनसीएसआईबीच बित्तीय साक्षरताका लागि सम्झौता
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंक र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग संगठन(एफएनसिएसआइ)बीच वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गर्ने सहमति भएको छ । एनएमबि बैंक र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग संगठनबीच वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा आशय पत्र हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता अनुसार एनएमबि बैंक सँगको सहकार्यमा एफएनसिएसआईले सो वित्तीय...
एनएमबीलाई लगातार ‘बैंक अफ दि इयर’को सम्मान, २०१८ को उत्कृष्ट नेपाली बैंक घोषित
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंकले पुनः ‘बैंक अफ दि इयर’को उपाधि प्राप्त गरेको छ। बेलायतस्थित द फाइनान्सियल टाइम्सले वर्ष २०१८ का लागि एनएमबी बैंकलाई लगातार दोश्रो पटक ‘बैंक अफ दि इयर’को उपाधिबाट सम्मान गरेको हो । एनएमबी बैंक यो उपाधिबाट सम्मानित भएको यो लगातार दोश्रो पटक हो । यसअघि सन् २०१७ का लागि समेत बैंकले ‘बैंक अफ दि इयर’को...
दाङको कोरोना विशेष अस्पतालमा आज ८ जनाले जिते कोरोना, डिस्चार्ज भएर घर फर्के
सहयोगी विकास बैंकले डिजिटल प्रविधिमार्फत वार्षिक साधारणसभा गर्ने, कहिले ?
बेलायतमा कार उत्पादन दशकै न्यून, अप्रिलमा १९७ युनिटमात्र कार निर्माण
ट्विटर र अन्य सामाजिक संचार माध्यमका कम्पनीहरू विरुद्ध नयाँ युद्धको घोषणा